Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 16
Ruka akataura zvakare mufananidzo unotaura nezvemunhu.
Uyu ndiwo mufananidzo wakaoma kukunda imwe mifananidzo yese kuti titurikire nekuti Jesu akayemura tsotsi. Nei akaita izvi? Nekuti vaFarise vaive vakateerera saka sevakuru vezvitendero vaishandisa zvinzvimbo zvavo kuwana mari.
RUKA 16:14 Zvino vaFarise vakanga vachida mari, vakanzwa izvozvo zvose vakamuseka.
SevaFarise, mutariri asina kururama, aive nechinzvimbo chemasimba. Akadzingwa basa, saka aida kutsvaga musha waaizogara.
RUKA 16:1 Zvino wakatiwo kuvadzidzi vake; kwakanga kunomufumi, waiva nomutariri; iye akacherwa kwaari zvichinzi unoparadza fuma yake,
2 Ipapo akamudana, akati kwaari; Izvi zvandinonzwa pamusoro pako ndezveiko? Chidavirira pamusoro povutariri bwako; nokuti haungazovi mutariri.
3 Zvino mutariri akati mumoyo make: ndichaiteiko ishe wangu zvowonditorera vutariri bwangu? Handine simba rokurima naro; kukumbira ndinonyara.
4 Ndinoziva zvandichaita, kuti kana ndaburitswa pavutariri vandigamuchire mudzimba dzavo.
5 Zvino akadana umwe noumwe wakanga ane chikwereti nashe wake, akati kunowokutanga; une chikwereti chakadiiko kunashe wangu?
6 Iye akati; Makate anezana amafuta. Akati kwaari; tora runyoro rwako gara pasi pakarepo, unyore makumi mashanu.
7 Akati kunomumwe: Ko iwe une chikwereti chakadiniko? Iye akati; matengu ane zana azviyo. Akati kwaari; Tora runyoro rwako, unyore makumi masere.
Ngatiedzei kuisa mufananidzo uyu pamaJuda.
Vaive vatariri veShoko raMwari uye Mweya waMwari muTestamente Yekare.
Vaitakura Shoko raMwari muareka yesungano, uye Mweya waMwari kuseri kwechidzitiro chemukati. Mafuta chiratidzo cheMweya waMwari. Zviyo zvinoita chingwa, chiratidzo chedzidziso yeShoko raMwari.
MaJuda aizoramba Mesia, nekudaro vaibva vazorasa nzvimbo yavo yavakapiwa naMwari sezvo vaisazoramba vari vatariri veShoko rake rechokwadi neMweya wake. Saka vaizodzingirwa kunze kweParestina nevaRoma. Saka Jesu akavaudza kuti vabate sevabati vemari uye vaunganidzi vepfuma zvaizovaita kuti vave vakakosha pakubatsira marudzi evaHedeni nemari. MaRoma akaparadzira maJuda pasi rese mushure mekupisa tembere yavo uye mumashure mekuparadza Jerusarema muna AD70. Uye vakazopedzisira kuvaita vatiziri kubva Jerusarema muna 135AD.
Vaparadzirwa Tembere yavo, yaive mudzi wekutenda kwavo, maJuda vaive vakufanira kunyora zvinyorwa zvavo zvekuzorarama nazvo mukati menguva yemakore 2 000 aizouya.
MaJuda akadzidza kurarama mukati mevanhu vemamwe marudzi, ikoko ruzivo rwavo rwekutsvaga mari runovagonesa kurarama uye runoita kuti vatambirwe nemavoko maviri munyika zhinji. MaJuda musanganiswa wekushanda nesimba uye ruzivo uye simba rekuita zvekutengesa uye kuchengeta mari nekuitenderedza mumabhizimisi, saka nekudaro vanosimudzira mamiriro ezvinhu munyika inenge yavatambira.
Muna 711 maArabu echiMosiremu akapamba Spain, maJuda akapfuma kwazvo munzvimbo dzezvekutengeserana, vakabva vasimuka kuva pazvinzvimbo zvepamusoro muhurumende semutsetse wevanhu vakabudirira vakaita kuti Spain ive yakapfuma kwazvo. MaJuda aya, nechipo chavo chehunyanzvi mune zvemabhizimisi, vakabatsira kuunza nguva yekubudirira uye kudzidza apo Spain yakatanga makore 700 ebudiriro yechiIslamu, apo Europe yese yakaramba iri mukati meNguva yeRima. Saka maJuda akabatsira kubudirira kwekuzviunganidzira pfuma kwemaIslamu.
Muna 1066 William mupambi akaunza maJuda echiFrench akatanga zvekuchengetera mari kumabhangi uye kukura kwehupfumi hwenyika muEngland. VeAnglo-Saxon vekuEngland vaive nemunyama wekuzivikanwa sevanhu vasingazivi, vane huwori uye vane makaro. Vanhu vasina kurongeka vasina kudzidza vechirungu vaive vasina hupfumi. MaJuda akaita bato rezvemabhizimisi revanhu vanoziva basa ravo. Vezvemabhangi vechiJuda vaive vari munezvemari dzaisanganisa mari zhinji. MaJuda ndiwo akatanga kubhenga mari muEurope nekuunza kwavakaita mari yemapepa. MaJuda akabatawo sevanyai pakati pevanhu vaidaidzwa kuti maMohamedans uye maKristu.
Kuita kwakaneta kweNguva yeRima kwaive nekuita kwekurwa, mapuristi achinamata, vemumaruwa vachirima. Kwaive kusina vemabhizimisi vaitengesa zvinhu zvakawanda panguva imwechete. Saka maJuda akafamba muzviitiko izvi vanhu vese vakawana rubatsiro.
MaJuda akadzingwa kuEngland, asi mumashure megore 1648 Oliver Cromwell akavakoka kuti vadzoke kuEngland kuti vakudze budiriro yekuEngland yezvehupfumi. MaJuda anobatsira mudzimba dzehumambo akazivikanwa kwazvo nekuda kweruzivo rwavo rwezvemari, sezvo vaigona kubatsira mambo mukutambudzika kwake pamusoro pesimba reavo vakuru munezvezivo. Mamwe maJuda akatanga mabhizimisi makuru kwazvo munzvimbo zhinji dzeEurope. Catherine mukuru, aitonga Russia kubva muna 1762 kusvika kuna 1796, akaona kuti aida maJuda kuitira kuti asimudzire hupfumi hwenzvimbo dzake itsva dzaaive apapa muPoland.
Ruka 16:8 Ishe wake akarumbidza mutariri usakarurama, nokuti wakanga aita nokuchenjera. Nokuti vana venyika ino vakachenjera parudzi rwavo kukunda vana vechiedza.
MuNguva dzeRima, ruzivo rwemaJuda rwezvepfuma rwakakurira makereke pakuvaka hupfumi hwenyika zhinji.
Ruka 16:9 Ndinoti kwamuri, muzviitire shamwari nefuma isakarurama, kuti kana yapera, vakugamuchirei mudzimba dzisingaperi.
MaJuda akatadza kuratidza Mesia wavo kunyika. Asi hunyanzvi hwavo munezvemabhizimisi uye zvekubhenga mari hwakaita kuti vatambirwe munyika dzakasiyana-siyana, munguva yavakapararira.
Kubatira nzvimbo dzatinogara kunoonekwa nemaJuda semurayiro. Nyika dzakapfuma munezvemari nekuda kwerubatsiro rwemaJuda pakufambisa zvinhu.
Ruka 16:10 Wakatendeka pazvinhu zviduku-duku wakatendeka vo pazvikuru; asi usakarurama pazvinhu zviduku-duku haangarurami vo pazvikuru.
MaJuda aive ari pakaoma nekuda kwekuva vapoteri vanotiza nyika yavo. MaJuda aishandisa hunyanzvi hwavo hwekuita mari kuitira kuti zvivaitire uye kuwedzera kugadzikika kwenyika yavari nekubatsira kusimuka kwemabhangi uye chikamu chepasi rese chezvematura emari.
Vezvekubhenga vechiJuda uye vemaindasitiri vakabatsira nyika zhinji. MaJuda akabvisa goridhe raidiwa nemauto emukuru wemauto Wellington zvakanaka uye nekukasika kubva kuEngland kuendesa kuSpain sezvo aive akunda hondo nemaFrench.
Kushandisa hunyanzvi hwavo hwezvemari kubatsira nyika zhinji kwakaita kuti maJuda awane mubairo mukuru kwazvo – kudzoka kwavo kumusha wavo.
Parizvino nyika dzakapamba Isrieri hadzina kubvira dzaisimudzira, sezvo vachiuraya kana kudzvanyirira maJuda. Dzimwe dzenyika idzi dzakatsakatika munhorondo.
MaRoma, maGiriki Byzantines, maSassanidis, maArabu, maKruseda, maMamluke, maTurks, nemaHingirandi.
MaTurk nemaHingirandi vaimbova nehushe hukuru, asi vakarasikirwa nahwo. MaArabu vanorarama munhamo muParestina, raive riri renje kana kuti nzvimbo dzakaraswa.
Asi maJuda akazokwanisa kudzoka muIsraeri, uye ndivo vari pamusoro pasi rese kushandura marenje kumaita nzvimbo dzekurima dzinopa chekudya. Ndirwo rwega rudzi rwakadzingwa mumusha marwo kwemakore 2 000, vakazokwanisa kudzoka. Ndiko kwega kumuka kwenyika kwakadai kana tichitarisa zvatinoona munhorondo yese.
Mumashure mehondo yepasi rese, maJuda kubva pasi rese akabatsira vagari vemuIsraeri nemari dzemamothi uye dzerubatsiro, mari idzi dzakaita kuti vagone kutenga minda nenzvimbo zhinji muParestina kubva kuvanhu vechiTurkish nemitengo yakaderera. Vakabvisa mvura zhinji dzaive dzakaungana, vakashandura marenje kumaita minda inopa chikafu.
MaJuda eWall Street ezvekutengeserana ekuNew York, nekuEurope veRothschild bankers (zvinogoneka kuti ndiyo mhuri yakapfuma kwazvo panyika), vanopa zvikwereti kunyika uye mabhizimisi epasi rese, uye vanobatsirawo nyika yeIsraeri yanhasi uno. MaJuda akashandisa mari zvakanaka kwazvo sezvo vava pachinzvimbo chepamusoro chakakosha chezvemari pasi rese. Hunyanzvi hwavo hwezvemari hwakavabatsira kurarama mukati memakore 2 000 ekumanikidzwa nekuurayiwa kukuru.
MaJuda ekuAmerica akabata zvikuru pakurarama kwenyika yeIsraeri. Muna 1948 Golda Meir akaenda kuAmerica kunokumbira $2 miriyoni kuti varwe hondo yaive yanetsa nemaArabu, izvi zvaizoita kuti Israeri iwana rusununguko rwayo. Golda akadzoka ne$20 miriyoni , yakazobatsira Israeiri zvikuru.
Israeiri ndiwo musha mukuruunotambira maJuda ese ari muhupoteri,zvekuti maHedeni akazadzwa nenyadzi dzekutadza kwavo paUnited Nations muna 1947 sechiito chekuripa vaive vararama pakuurayiwa kwakaitwa pahorokasiti yeNazi muna 1941-1945 pakafa maJuda 6 miriyoni. Russia, iri pasi paStalin, yakabata zvikuru pakubatsira kuitwa kweIsraeri nyika yakasununguka. Izvi zvaitoshamisa nekuti Stalin aive akavenga maJuda.
Mwari anoshandisa chero munhu waanoda kuti azadzise hurongwa hwake hukuru.
RUKA 16:11 Naizvozvo kana musina-kuva vakatendeka pafuma isakarurama, ndiyaniko uchakutendai nefuma yezvokwadi?
Nekushandisa matarenda avo emari kuvaka hupfumi hwedzimwe nyika, Mwari akatendera maJuda kuti avake Israeri semusha wavo; nzvimbo yeruchengetedzo yavanokwanisa kuzvichengetedza vari. Vakavaka nzvimbo dzisingabereke, dzaive dzemaTurkish, kwaigara maArabu munhamo, kuva maguta uye nyika ine simba kwazvo kupfurikidza hunyanzvi hwavo hwakakura hwezvemari. Saka maJuda akakwanisa kushandisa matarenda avo emari kuvaka nyika yavo kupfurikidza kutenga nyika kumaTurkish, uye kutora dzimwe nzvimbo dzose kubva kumaArabu vakaramba kuteerera zvakataurwa neUnited Nations kuti Palestine ikamurwe kuita nyika mbiri, maArabu achipiwa 80% nemurayiro weBritain, waidaidzwa kuti Transjordan, pamwechete nehondo yavo yaive nezvombo zvechimanje-manje dzaitungamirirwa nevakuru vekuBritain. Nekuramba zvaive zvataurwa neUN maArabu akasarudza kuita hondo nechinangwa chekubvisa zvachose maJuda uye vachiedza kutora 100% yenyika yePalestina yaitongwa neBritain.
MaJuda akakunda, saka chiporofita chakabva chazadziswa (chinova chokwadi) chekuti vachadzoka kumusha wavo vogarako.
AMOSI 9:15 Ndichavasima panyika yavo, havangazodzurwi zve panyika yavo, yandakavapa-ndizvo zvinotaura JEHOVA.
Hupfumi hwavo hwechokwadi ndiko kudzoka kwavakaita mumusha mavo vakamirira Mesiasi.
RUKA 16:12 Kana musina kuva vakatendeka pazvinhu zvomumwe, ndiyaniko uchakupai zvenyu?
Dai vaive vasina kutendeka sevatariri vepfuma yevamwe vanhu kumabhangi, vaizopihwa sei musha wavo?
Zvino zvavakarwira nzira yavo vachidzoka kunyika yavo yechipikirwa zvisinei nezvipingaidzo zvikuru, Mwari ari kuvagadzirira kuti vagoita chinangwa chavo chemweya, chinova kugamuchira Mesiasi wavo mukati menguva yeKutambudzika kukuru. Ichi ndicho chipo chakakosha chikuru chichagamuchirwa nemaJuda.
Mutariri akadzosa hafu yechikwereti chemafuta (50%) asi zvikamu 20 zvezviyo ( sezvo aikwereta akanyora chikwereti che 80% chezvaaikwereta).
MaJuda aive neMweya waMwari unokwana muTestamente Yekare, waive hafu (50%) yehurongwa hwaMwari. Vakakundikana.
Sarudzo dzemuna 1947 dzeUnited Nations dzakavapa 20% yenyika yeBritish Palestine pamurayiro. Imwe yese vaizoitora nekurwa nemaArabu vakatanga hondo navo.
RUKA 16:13 Hakunomuranda ungagona kubatira vatenzi vaviri: nokuti uchavenga mumwe, akada mumwe, akazvidza mumwe; hamungabatiri Mwari nefuma.
Kubatira kuda kuunganidza mari kunova chinangwa chikuru chekurarama kwedu, pachinzvimbo chekubatira humambo hwaMwari, hunova zaruriro yechokwadi muBhaibheri.
Pakutanga, maJuda akararama vachishingirira kuti vave nemari, zvaizovabatsira kuti vadzoke kunyika yavo yechipikirwa.
Pakati penguva iyi vaiisa mari pamberi Mwari mumashure.
Mukati nenguva yeKutambudzika kukuru kufunga kwavo kuchashanduka. Ipapo vachaisa Mwari pamberi, apo Messia anodzoka kuzovaponesa.
Izvi zvichaitika mumashure mekuparidza kwemaporofita maviri (Mosesi naEria).
RUKA 16:15 Akati kwavari: imi munozviruramisa pamberi pavanhu; asi Mwari unoziva moyo yenyu; nokuti izvo zvinokudzwa pakati pavanhu, zvinonyangadza pamberi paMwari.
MaJuda (nesu tese) tinoruramisira kutsvaga mari sechikonzero chekuva kwedu panyika. Vanhu vanofadzwa nepfuma. Asi Mwari anoona zvinhu nenzira yakasiyana.
Pane hurongwa hwemweya huri kuda kuiswa kwatiri naMwari panguva yekupedzisira, uye kutsvaga mari hachisi chinangwa chaMwari.
Sekudzoka kuri kuita maJuda kumusha wavo wechipikirwa, saka Mwari anodawo kuti kereke yemaHedeni idzokere pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Uku ndiko kutenda kuchadzoserwa kuvaJuda naMosesi naEria.
RUKA 16:16 Murayiro navaporofita zvakanga zviriko kusvikira kunaJohane; kubva panguva iyo hushe bwaMwari bwunoparidzwa, mumwe nemumwe unopinda mabwuri nesimba.
SemaJuda zvavakava nenguva yakaoma mukati menguva dzemakereke, saka maKristu anofanira kutarisirawo kusangana nenguva yakaoma.
Murayiro waive mumvuri wekutenda kweTestamente Itsva. Jesu ndiye aive muviri wemumvuri iwoyo. Maporofita akaporofita kuuya kwaMessia. Johane ndiye akava muporofita wekupedzisira, nekuti pamazuva ake ndipo pakauya Jesu ari Messia. Parizvino Mwari anoda kurarama mumoyo yevanhu yaakashandura. Asi hazvisi nyore kuva muKristu. Munhu mumwe nomumwe anofanira kushingirira kuti abatire Mwari panyika, vasina kunyengerwa nedzidziso dzakaitwa nevanhu, tsika dzezvitendero uye mazano evatungamiri vevanhu. Zvakaomawo zvakare kuti tisanyengerwe tichipinda mukutenda kuti chinangwa chedu chikuru chekuva panyika ndechekuti tipfume. Kuwedzera pane izvozvo Satani anoita chokwadi kuti apikisa wese aswedera kuchokwadi nekukonzeresa matambudziko mudzimhuri, zvemari, hutano kana mumabasa. Munhu anofanira kutoshinga kuti abudirire, nhanho nenhanho, tichipinda muhurongwa hukuru hwaMwari hwenguva yedu.
RUKA 16:17 Asi zvakareruka kuti denga nenyika zvipfuure, pakuti tsanga imwe yomurairo ikoneswe.
Hakuna chakanyorwa muBhaibheri chekunyepa. Tinofanira kutenda Shoko rega rega. Vanhu vashoma kwazvo vanogona kuita izvi. MaKristu mazhinji anoteerera zvimwe zvikamu zveBhaibheri, asi vorega kuteerera zvimwe zvikamu zveBhaibheri. Musafe makatenda kuti mune chakakanganiswa muBhaibheri. Musafe makatenda kuti kune mavhesi maviri anorwisana. Musatende zvakare kuti kune Magwaro asina kukosha.
Vesainzi havazivi kuti basa re 95% yeDNA yedu nderei, asi vesainzi vanofunga vakaona kuti 95% yeDNA iyoyo haisi marara sezvinotaura vamwe vanhu, asi haizivikanwe kuti inoshandei nekuda kwekusaziva kwedu isu vanhu. Rimwe zuva tichaziva zvakawanda pamusoro peizvi. Parizvino tinoziva kuti zvakakosha, toramba tichitsvaga kuti tinzwisise zviri nani.
Zvakadaro, Magwaro ese ndeechokwadi. Kana musingazvinzwisisi parizvino, tsvagisisai mugadzirire kugona kuteerera kune vamwe. Dzimwe nguva mhinduro inouya kana mukaramba muchiitsvaga.
II TIMOTIO 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa nokuraira nokururamisa, nokuranga kuri mukururama.
Dzidziso inotidzidzisa chokwadi. Kuraira kunotiudza zvatinotadza. Kururamisa kunotiswatudza mafungiro edu patisinganzwisisi kana patinokanganisa kuturikira Magwaro. Kururama kunotiita vanhu vari nani.
Parizvino Ruka ave kunyora pamusoro pechinhu chikuru chiri kukanganiswa nemakereke.
RUKA 16:18 Mumwe nomumwe anorasha mukadzi wake, akawana mumwe, unoita vupombwe; vuye mumwe nomumwe unowana wakarashwa nomurume, unoita vupombwe.
Hakuna chinhu chinonzi kurambana, nekuroorazve kana munhu wawanga wakaroorana naye achiri mupenyu. Sungano yewanano inoramba iripo kusvikira “maparadzaniswa nerufu”. Hakuna chinhu chinogona kuparadza sungano kana yatoitwa.
Pano, nekuda kuyanana kwavo nenyika kuti varambe vari nembiri uye vachiwirirana, kereke yakaita chitadzo chikuru. Zvese zvavanoti vakachatazve vangori vanhu vaviri vari kugara muhupombwe. Vachadaira kune izvi musi wezuva Rekutongwa. Vakuru vezvitendero vakavachatisazve vachadaira musi weKutongwa. Pazuva iroro zvinhu hazvizomire zvakanaka kwavari vose.
JAKOBO 4:4 Imi vovutere, hamuzivi here kuti vushamwari hwenyika hunovengana naMwari? Naizvozvo mumwe nomumwe unoda kuva shamwari yenyika unozviita muvengi waMwari.
Mufananidzo unotevera wemupfumi nemurombo, unoratidza kuti zvinhu zvese kudenga zvakamira zvakaisa musoro pasi makumbo mudenga pazvinhu zvatinoona panyika.
RUKA 16:19 Mumwe mufumi wakanga ari’po, waipfeka nguvo tsvuku nemicheka yakanaka, nokufarira zvakaisvonaka-naka misi yose.
20 Zvino mumwe murombo, wainzi Razaro, wakanga ane maronda mazhinji, akaiswa pasuvo rake.
21 Achida kuzvigutsa nezvaive patafura romufumi, kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake.
22 Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamuisa pachifuva chaAbrahama, mufumi akafa vo, akavigwa;
23 Zvino ari paHadesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro, akavona Abrahama ari kure, naRazaro ari pachifuva chake.
Paakafa mupfumi akava wechitendero, apa aive oda kuita hushamwari nemurombo. Asi nguva iyoyo yaive yadarika kare.
Paive pasisina nzira yekubuda nayo. Muganhu waive watotarwa kare.
Akabva akumbira kuti mumwe munhu amutswe kuvakafa anoyambirawo hama dzake. Akabva atanga kuva muvhangeri. Asi nguva yaive isisipo.
RUKA 16:29 Abrahama akati Mosesi navaporofita vanavo, ngavavanzwe ivo.
30 Iye akati: Kwete baba Abrahama, asi kana mumwe akabva kuvakafa, akaenda kwavari, vangatendevuka.
31 Akati kwaari: kana vasinganzwi Mosesi navaporofita, havangatendiswi, kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa.
Muyeuchidzo wakakwana. Kana tisingagoni kutenda chokwadi cheTestamente Itsva yekereke yekutanga nhasi, kana kereke yekutanga ikamutswa kuvakafa ikavonekwa kwatiri, hatingatendi zvavanotaura. Nekuti vachangotaura zvakanyorwa muBhaibheri. Saka hatizokwiri pamwechete navo kuenda kudenga.